Izindaba - Yini iLanga Protection Clothing? Yini Ukwelashwa kwe-UPF?
Uma ungumuntu osebenzayo osebhishi lolwandle, i-surfer noma ingane yamanzi, kungenzeka ukuthi ukhale ngokuthi kufanele uqoqe esikrinini selanga njalo lapho ujika. Ngemuva kwakho konke, kunconywa ukuthi ufake kabusha isikrini selanga njalo emahoreni amabili noma ngaphezulu - ikakhulukazi uma ususa ithawula, ubhukuda noma ujuluka njalo. Futhi yize lokhu kungeke kuxazulule zonke izinkinga zakho - ngoba kunconyelwe ukuthi kusetshenziswe ekuxhumaneni nesikrini selanga - singakwethulela izingubo zokuvikela ilanga?
Hhe? Kwehluke kanjani kunezingubo ezindala nje, ubuza?
Kulungile ukuqala, udokotela wesikhumba, u-Alok Vij, MD, uthi uma ekhuluma ngezindwangu sebenzisa igama elithi "UPF," elimele i-ultraviolet factor factor. Futhi nge-sunscreen, sebenzisa igama elithi "SPF," noma into ejwayelekile yokuvikela ilanga. Uyachaza: “Amahembe amaningi kakotini akunikeza okulingana no-UPF wezi-5 uma uwugqokile.
“Izindwangu eziningi esizigqokayo ziyi-weave evulekile evumela ukukhanya okubonakalayo ukuthi kudlule kuze kufike esikhunjeni sethu. Ngezimpahla ezivikelwe yi-UPF, ukwelukwa kuhlukile futhi izikhathi eziningi zenziwa ngendwangu ekhethekile ukusiza ukwakha umgoqo emisebeni yelanga. ”
Ukukhanya kwe-UV kungangena emigodini emincane esevesini yezingubo ezijwayelekile noma kungahamba ngisho ngqo ngehembe elinombala okhanyayo. Ngezingubo ze-UPF, ibhlokhi likhulu kakhulu, likunikeza ukuvikeleka okwengeziwe elangeni. Vele, ukugqoka nge-UPF kuvikela kuphela izindawo zomzimba wakho ezimbozwe yindwangu elashwa.
Iningi lezembatho zokuvikela ilanga libukeka futhi lizwakala njengokugqoka okusebenzayo noma ukugijimela futhi liza ngamahembe ahlukahlukene, ama-leggings nezigqoko. Futhi ngenxa yokubalwa kwentambo ephakeme, imvamisa izwa ukunethezeka okuthe xaxa uma kuqhathaniswa nesikibha sakho esijwayelekile.